Converter MOV u Mac: Beddelaan MOV (Quicktime) ama ka qaab kasta oo ku Mac
> Resource > Mac > Converter MOV u Mac: Beddelaan MOV (Quicktime) ama ka qaab kasta oo ku Mac
Wondershare Video Converter u Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah) waa Converter a full-saftay MOV u Mac, kaas oo awood kuu si loogu badalo QuickTime MOV in qaab video kasta, waxaad tidhaahdaan, MP4, M4V, DV, AVI, FLV, Mpg, 3GP, 3G2, MKV, VOB, DivX, DVD iwm Mac la video tayo sare leh, iyo qeybsanaan.
Sida aan ognahay, Apple ayaa arounced MOV waa mid ka mid ah Mac-taageeray qaabab video. Laakiin ogow in ay jiraan qaar ka mid ah la dhaafi karin, kaliya qaar ka mid ah video codecs gaar ah (H.264 iyo MPEG-4) iyo video qaraarada gaar ah iwm waxaa taageera. Waxay ka dhigan tahay faylka MOV ah waayi maayo ciyaaro Mac haddii aysan fulin karin shuruudaha gabi ahaanba. Taasi waa sababta dadka isticmaala inta badan ay ku guuldareysato inay ka ciyaari MOV (gaar ahaan kuwa files MOV ka kaamirada) on Mac oo u baahan Converter MOV caawimaad ah.
Haddii aad sidoo kale soo gaarto qaar ka mid ah files QuickTime MOV in aan la aqbali karin by Mac ama aad rabto si loogu badalo videos in MOV Mac-socon for loo maqli on qaar ka mid ah wax soo saarka Apple, tixgelin u sameeyeen. Tani MOV video Converter u Mac halkan soo bandhigay wax hoos aad ku dayn doonaa. Oo waxay hoos ku qoran, waa tuse faahfaahsan waxaad kala socon kartaa talaabo talaabo ah.
1 Download, rakibi oo ay maamulaan MOV this (QuickTime) Converter Mac
Download barnaamijka adigoo gujinaya xiriirka hoose. Markaas, rakibi iyo waxa maamula.
2 dar MOV (QuickTime) ama kale videos in Converter MOV, waayo, Mac
Si aad u dajiyaan MOV (QuickTime) ama faylasha kale barnaamijkan, waxaa jira laba siyaabood oo optional aad kala dooran kartaa:
Guji "File" menu, ka dibna dooro "Load Media Files" menu in caleenta iyo dooran video files aad rabto in aad soo dhoofsadaan.
MOV Import ama videos kale oo ay soo jiiday iyo tagtey files bartilmaameedka in this app Mac.
3 Dooro MOV (QuickTime) ama kale videos sida qaab wax soo saarka
Hit ah "Qaabka" icon hoose ee Murayaad this app ee. Ka dibna dooro waxa aad rabto. Tusaale ahaan, u tag "Video"> "MOV" haddii aad rabto in aad MOV (QuickTime) sida qaab wax soo saarka. Si kastaba ha ahaatee, u loo maqli on a wax soo saarka Apple gaar ah sida iMovie, FCP, iDVD, iPhone, iPad, iPod, Apple TV iwm, inaad si fiican u dooran lahaa qaababkan si toos ah-filaayo in ay bixiyaan app inuu ku haboon ugu fiican. Looma baahna in la dhigay xuduudaha kasta.
4 badalo MOV (QuickTime) on Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Si aad u billowdo diinta MOV ee Mac OS X, waxaad kaliya riix "Beddelaan" button on geeska hoose ee midigta ah interface ugu weyn. Waxa ay sameeyeen. App Tani waxay si toos ah finishe doonaa diinta video aad u. Next, waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa si ay u tagaan folder wax soo saarka si aad u ogaato faylasha saarka isticmaalka. Haddii aad rabto in aad u geliyey qaar ka mid ah qalabka Apple, kaliya jiidi files wax soo saarka si ay u Lugood dibna u hagaagsan in qalabka.
Wmv Converter u Mac: Beddelaan wmv ama From qaab kasta oo ku Mac
Mactubes Alternative: Download Online Video fiican yahay Mactubes
MacX YouTube Downloader Alternative: Download Online Video fudayd
Image Recovery Mac: Sidee inuu ka soo kabsado Image ka Mac
Sida loo sii qulquli Music ka Mac si iPhone
iMac Photo Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photo ka iMac
Best iPad Explorer File u Mac
Sidee inuu ka soo kabsado Mac Files ka dib markii formatting Macintosh HD